सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न, मनिटरिङ तथा अनुगमन गर्नु राज्यको दायित्व हाे;-नेफ्स्कुन उपाध्यक्ष | MeroKhabarSathi
सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न,…
सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न, मनिटरिङ तथा अनुगमन गर्नु राज्यको दायित्व हाे;-नेफ्स्कुन उपाध्यक्ष
चितवन- सिद्धि विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. भरतपुर–२ ले प्रतिनिधिमूलक १३औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । चौध सयजना शेयर सदस्यहरुबाट ७० जना छनौट गरी प्रतिनिधिमूलक १३औं साधारण सभा बुधबार सम्पन्न गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेफ्स्कुनका उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारी र विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २ पूर्णबहादुर श्रेष्ठले संयुक्त दियो प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरेका थिए ।कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि अधिकारीले सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न, मनिटरिङ तथा अनुगमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले संस्था दर्ता गर्नेदेखि विकास भए नभएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । विशिष्ट अतिथि वडाअध्यक्ष श्रेष्ठले यस संस्था हितका कुनै अप्ठ्यारासँग जुध्नको लागि आफू सदैव तयार रहने बताए । उनले महानगर तथा जोकोहीलाई कुनै पनि समस्या भए निर्धक्क आउनु हुन र आफूले सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
संस्थाका अध्यक्ष थिरप्रसाद धितालले संस्थालाई उत्कृष्ट साकोस बनाउने अभियानमा रहेको बताए । आगामी दिनमा संस्थाको विकासका लागि एटिम र कार्डलेस अभियानमा संस्थालाई जोड्ने उनको भनाइ थियो भने संस्थालाई परिस्कृत तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उनले भने । कार्यक्रममा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष शालिकराम घिमिरे, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम गौतम, युनियम लाइफ इस्योरेन्सका भीमलाल पौडेल, उपाध्यक्ष मदनप्रसाद सापकोटा, सल्लाहकार दिपक उप्रेतीलगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । उक्त अवसरमा कोषाध्यक्ष जयराम पाण्डे, व्यवस्थापक विकास पौडेल, लेखा संयोजक विनोद पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त अवसरमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट शेयर सदस्यहरुलाई दोसल्ला, नगद तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गरेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन मंसिर २० देखि सुरु भएको र २४ गते (बुधबार) ५ दिनमा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष थिरप्रसाद धितालको सभापतित्वमा भएको थियो भने सचिव मुकुन्दप्रसाद गौतमले संचालन गरेका थिए ।